China Casserole mu Round Rakaumbwa SKU NO.271-272-273-274-275-276 Manufacturers uye Suppliers | SJZ JINXUAN
Aakatipa Kitchen-to-Table pakawanda The girazi Casserole kuti nyore kubika zvokudya mberi nguva uye amatura mufiriji kana furiza kuti gare gare. Kupfuura zvose, kuti Casserole kuchinja anonyatsotsanangura kubva muchoto chero tafura kuisira chakanaka achishumira, uye zvinosara vanogona kuenda kurudyi kare firiji pakupera usiku. Ndapota Cherechedza: haifambi regirazi Casserole zvakananga kubva furiza kuti hovhoni. Regai kudya nyungudika vasati kubika kana reheating muchoto. Iva nechokwadi kuti kushandisa potholder pakukurukura ...
The girazi Casserole kuti nyore kubika zvokudya mberi nguva uye amatura mufiriji kana furiza kuti gare gare. Kupfuura zvose, kuti Casserole kuchinja anonyatsotsanangura kubva muchoto chero tafura kuisira chakanaka achishumira, uye zvinosara vanogona kuenda kurudyi kare firiji pakupera usiku.
Ndapota Cherechedza: haifambi regirazi Casserole zvakananga kubva furiza kuti hovhoni. Regai kudya nyungudika vasati kubika kana reheating muchoto. Iva nechokwadi kuti kushandisa potholder pakukurukura inopisa rinoonekera.
The girazi Casserole inogona kushandiswa kubika kana reheat chikafu munzvimbo kwakajairika muchoto kana mune microwave muovheni. Ona kuburikidza girazi mativi anobvumira effortlessly peaking pa mberi zvekudya kana kubika, ichipa akawedzera kudzora okupedzisira zvabuda.
casseroles aya yaakaita borosilicate girazi-yakanaka chafariz kuwedzera uye saka zvishoma asingatani zvachose kana kutarisana tembiricha kuchinja.
Ndapota Cherechedza: Glass Casserole harifaniri kushandiswa pasi bvunzurudza, pamusoro stovetop, kana doro kana zvomumagaba kupisa burners sezvo zvakananga kupisa kunobva.
Integrated divi Rinonyorerana kubvumira zvakachengeteka nokusimudza girazi Casserole iri uye kubva muchoto uye kubva mukicheni kusvikira dzokudyira-kamuri tafura kana retafura uye shure zvakare. The yakakunakira divi Pazvibato ribatsire rakachengeteka akabata, kunyange apo akapfeka gobvu hovhoni mitts.
Previous: Casserole mu Oval Rakaumbwa SKU NO.277-278-279-2710-2711
Casserole mu Round Rakaumbwa SKU NO.273D
Casserole mu Round Rakaumbwa SKU NO.272D
Casserole mu Round Rakaumbwa SKU NO.274D
Casserole mu Oval Rakaumbwa SKU NO.277-278-279-2710 ...
Casserole mu Oval Rakaumbwa SKU NO.2712
2019 ambiente Frankfurt Booth kupisa muchipikisa ...
Double Walled Tea Glass, Borosilicate Glass Bakeware , Borosilicate Glass Pot, Borosilicate Glass Casserole , Borosilicate Glass Food Container , Borosilicate Glass Food Containers ,